Mungagadzirisa Sei Kusawirirana Munyaya Dzebhizimisi pamaKristu | Rudo rwaMwari
Sezvakanyorwa pana 1 VaKorinde 6:1-8, muapostora Pauro akakurukura nezvekuendesana kumatare kwevanhu vanonamata vose. Akaodzwa mwoyo nevamwe vaKristu vomuKorinde ‘vaitsunga kuenda kudare pamberi pevanhu vasina kururama.’ (Ndima 1) Pauro akapa zvikonzero zvinonzwisisika zvokuti vaKristu vasaendesana kumatare okunyika asi kuti vagadziriswe neungano kusanzwisisana kwavo. Ngatikurukurei zvimwe zvikonzero zvakaita kuti zano iri rakafemerwa ripiwe, tozokurukura kuti ndepapi paringarega kushandiswa.
Kana tikatadza kuwirirana panyaya dzebhizimisi nomumwe watinonamata naye, chokutanga ngatifungei kugadzirisa nyaya yacho sezvinodiwa naJehovha kwete zvatinoda isu. (Zvirevo 14:12) Sezvakataurwa naJesu, zvakanaka kugadzirisa nyaya isati yakura. (Mateu 5:23-26) Zvisinei, zvinosuwisa kuti vamwe vaKristu vanonetsana zvakanyanyisa, zvokutozosvitsana kumatare okunyika. Pauro akati: “Zvinoreva kuti makundikana zvachose zvamuri kumhan’arirana.” Nei? Chikonzero chikuru ndechokuti zvinogona kusvibisa zita rakanaka reungano uye Mwari watinonamata. Saka tinofungisisa mubvunzo waPauro wokuti: “Nei musingasvi henyu mabvuma kuitirwa zvakaipa?”—Ndima 7.
Pauro akaratidzawo kuti Mwari akaisa urongwa hwakanaka hwokugadzirisa nyaya dzakawanda muungano. Vakuru varume vechiKristu vakangwara nokuti vanoziva chokwadi chomuMagwaro, uye Pauro anoti, ‘vanokwanisa kutonga vachienzanisa hama’ ‘panyaya dzoupenyu huno.’ (Ndima 3-5) Jesu akaratidza kuti kutadzirana kwakakura kwakadai sokuita makuhwa uye kubiridzira, kunofanira kugadziriswa pachishandiswa matanho matatu: rokutanga, kuedza kugadzirisa nyaya vatadzirana vacho muri moga; kana rekutanga raramba, rechipiri, motora chapupu chimwe chete kana zviviri; rechitatu, kana izvozvo zvaramba, moisa nyaya yacho kuungano ichimiririrwa nevakuru.—Mateu 18:15-17.
Chokwadi, vakuru vechiKristu havasi vanachipangamazano vezvomutemo kana kuti zvemabhizimisi, uye havafaniri kuita saizvozvo. Havatemere hama dzatadzirana kuti dzoripana sei. Chavo kubatsira vari kunetsana vacho kushandisa Magwaro kuti vagadzirise nyaya yavo mune zvakanaka. Munyaya dzakaoma kunzwisisa, vangada kubvunza mutariri wedunhu kana kuti hofisi yebazi yeZvapupu zvaJehovha. Zvisinei, pane dzimwe nyaya dzisingashandiswi zano raPauro. Ndedzipi dzimwe dzacho?
Dzimwe nguva nyaya ingaendeswa kudare nokuti ndizvo zvinenge zvichifanira kuitwa kana kuti ndozviri pamutemo zvinoita kuti nyaya ipere zvisina mutauro. Somuenzaniso, kuendesa nyaya kudare kungava ndiko chete nzira inenge iripo yokuti muchato udimburwe, yokupiwa kodzero yokuchengeta mwana, yokuwana nayo mari yemendenenzi, yokubhadharwa nayo neinishuwarenzi, yekunyorwa somumwe wevanhu vane mari dziri mukambani yabhuroka, uye yokuratidza nayo kuti mashoko omushakabvu akanyorwa muwiri ndeechokwadi. Pane dzimwewo nyaya dzokuti hama yamhan’arirwa kudare ingamanikidzwa kumhan’arawo ichizvidzivirira. *
Kana nyaya dzakadaro dzikaendeswa kumatare pasina chinangwa chokukaurisana, izvozvo zvinenge zvisingapesani nezviri muzano raPauro rakafemerwa. * Kunyange zvakadaro, chinofanira kunyanya kukosha kumuKristu kutsveneswa kwezita raJehovha uye rugare nokubatana kweungano. Vateveri vaKristu vanonyanya kuzivikanwa norudo rwavanarwo, uye “rudo . . . haruzvitsvakiri zvarwo.”—1 VaKorinde 13:4, 5; Johani 13:34, 35.
^ ndima 2 Kunyange zvisingawanzoitiki, muKristu anogona kupara mhosva yakaipisisa yakadai sekubata chibharo, kurova, kuuraya, kana kuti kuba chinhu chakakura achizviitira mumwe muKristu. Pakadaro, muKristu anenge asina kukanganisa kana akamhan’ara nyaya yacho kumapurisa, kunyange zvazvo ingapedzisira yava kumatare edzimhosva.
^ ndima 3 Kuti uwane mamwe mashoko, tapota ona Nharireyomurindi, yaMarch 15, 1997, pamapeji 17-22, neyaOctober 15, 1991, pamapeji 25-28.
Tingaita sei kuti tirambe tine rugare nevamwe? Dzidza kubva pamienzaniso yakanaka neyakaipa yakanyorwa muBhaibheri.